Baaq xanbaarsan warbixin & fariin uu soo jeedinaayo Suldaanka beesha Mahra Somaliya Suldan C/Qadir Faarax Shabeel
Waxaa dhawaanahan socday kulamo iyo fadhiyo loogu tala galay turxaan bixinta iyo mideynta Beelweynta Mahra ee ku dhaqan Soomaaliya.
Hawshaas ayaa waxaa u guntaday Suldaan C/Qaadir asaga oo garab ka helaya waxgaradka gudaha iyo dibadaba, taasoo u muuqata mid lagu najaxay intii badneyd.
Suldaan C/Qaadir Faarax, ayaa hadaba u gudbinaya Beelweynta Mahra Soomaaliya meel ay joogtaba fariin ku wajahan dadaalka ay wadaan si beel mideysan oo hal waji leh loo helo.
Fariintii Suldaanka ayaa aheyd sidan
"Walaalayaal beryahanba waxaan wadnay hawl ku aadaneyd turxaan bixinta iyo talo gelinta Beeshan, anagoo kasoo bilaabnay magaalada Boosaaso, kuna xijinay Qardho iyo Garoowe, hadana ku sugan Magaalada Gaalkacyo, oo ah goobta noogu danbeysa ee aan gacanta kula jirno hada hawsheedii.
Marka aan ka tagtno Gaalkacyo, sadexda Gobal ee kale waxaan ku guuleysanay anagoo iskaashaneyna in si wadajir ah mid walba nidaam iyo kala danbeyn ay ku dhaqmaan ka hirgalino, ayadoo wax walbana laga midoobayo, waana ilaahey mahadiis intaasi noqoto fariimo lagu diirsado wadajir, wadatashi & aayo katalin u bidhaantay beelweynt Mahra, anoo u rajeynaya Gaalkacyana in ay jidkaas raacdo, nalana qaadato, wadajirka iyo walaalnimada nolashooda mustaqbalku u baahan tahay.
Fariinta aan wadaa ka Suldaan ahaan, waa midaas aan ku raadineyno in aan aan helno, umad mideysan, walaalo ah, wax wadaqeybsi iyo kalgacalna ka dhaxeeyo, goobtay doonaan haku sugnaadeene.
Si gaar ah ayaan Jaaliyadaha dibada ula socdsiinayaa in ay nala qaataan fikirkaas walaalnimada iyo aayo katalinta Beelweynta Mahra xambaarsan, ayna ayaga oo mudan, sida ay tahay u qaataan go'aanada aan u soo gudbinay, ee wax wada qaybsiga iyo wadajirka ku qotama, ayna la shaqeeyaan Gobal walba gudiyada aan u asteynay in ay la shaqeeyaan,garab istaagaan, ayagoo wixii talo iyo tusaala ahna ku biirinaya.
Ugu danbeyn waxaan U MAHANAQAYAA ALLAAHA NA ABUURAY, ANIGOO UGA MAHADCELINAYA NICMADA UU NA SIIYAY,taas kasakoow, waxaan u mahadcelinaya Gudiga Dallada Jaaliyada Mahra ee Qurbaha, ayagoo dhiiri galin iyo dhaqaaleba ku bixiyay qabsoomida hawlaha aan wadno, ha xasuusnaado qof walba oo Beelweynta Mahra in kaalintiisu banaantahay, loogana fadhiyo buuxninteeda, talo, tusaale iyo TABARBA."
SULDAANKA BEELWEYNTA MAHRA SOOMAALIYA
SULDAAN C/QAADIR FAARAX SHABEEL